Archive du 13-juin-2022
Fifidianana 2023 Manomboka ny famotehana ireo mety ho kandida
Voaantso hatao fanadihadiana eny amin’ny BIANCO (Bureau Indépendant Anti-corruption) Atoa Rakotovao Rivo Mpandrindra Nasionalin'ny Antoko HVM, anio 13 jona 2022 amin’ny 9ora sy sasany maraina, araka ny taratasy
Mahery amin’ny ratsy !
Rehefa tena zohiana ny tantara sy ny zava-misy, atao ny fampitahana, refesina ny zavatra nampanantenaina sy ny zavatra tanteraka,
Ady amin’ny kaompanian-tsolika Hampirefotra krizy be raha tsy voalamina
Mihalalina ary ahiana hivadika ho krizy goavana manampy trotraka ny efa misy ny olan’ny Fanjakana sy ny kaompanian-tsolika.
Fibatana olona teny Ivandry Mitantara ny nanjo azy ny vehivavy iray
12.. TAB Toyota 4x4 Fortuner « gris foncé métalisé » manakaiky ny loko mainty. «Vitre fumé» avokoa ary misy sainan’ny klioban’ny baolina kitra frantsay,
Minisitry ny fitaterana “Hofongoriko ny tontakely, tsy matahotra hoesorina”
Natsikafon’ny Minisitry ny fitaterana Roland Ranjatoelina nandritra ny fihaonan’ny tamin’ny mpiasan’ny Air Madagascar sy ny Sofitrans ny sabotsy teo teny Anosy
Fampanantenana poakatin-dRajoelina Any izay ny 400MW hamahana delestazy e !
Vava tsy vava no nataon’ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina tamin’ny propagandin’ny fifidianana 2018. Natao fitaovana ny fampanantenana tsy tanteraky ny Filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina,
Mirongatra be ny covid-19 Niakatra 100% ny tranga vaovao
Tsy mitsaha-mitombo ny trangana coronavirus eto Madagasikara. Tafiakatra 207 ny tranga vaovao tao anatin’ny herinandron’ny 4-10 jona 2022, raha toa ka 101 ny herinandro teo alohany.
Mpivarotra - Pavillon Analakely “Tsy mila SMGD izahay, vitanay ny fikarakarana”
Nanamafy ny teniny ireo mpivarotra etsy amin’ny pavillon Analakely omaly fa tsy mila ny SMGD na ny “Société Municipale des gestions digitales”
Pr Mamiharijaona Ramaroson “Lainga ny resaky ny Minisitry ny angovo momba ahy”
Nandiso ny zavatra nolazain’ny Minisitry ny angovo sy ny akoran’afo Andry Ramaroson tao amin’ny fahitalavitra iray ny 11 jona teo mikasika azy ny Professeur Titulaire ao amin’ny Oniversiten’Antsiranana Mamiharijaona Ramaroson
Paul Rabary “Tsy fananana Euro sy Dolara betsaka no olantsika izao”
Tsy hitombona mihitsy ny hoe foanana ny MID dia hivaha ny olana eto Madagasikara, hoy ny mpahaifiarahamonina politika Paul Rabary,
Varotra rongony mahery vaika Olona 6 indray no voasambotra teny Tanjombato
Voasambotry ny Polisy miasa ao amin'ny kaomisaria foibe ao Tanjombato tao amin'ny fari-piadidiany ny olona enina mianadahy nahitana lehilahy telo sy vehivavy telo ny sabotsy 11 jona lasa teo tokony ho tamin'ny 6 ora maraina
Ahiahina hala-jaza, fitsaram-bahoaka Sakoroka sy poa-basy be tany Manja-Menabe omaly
Nisehoana gidragidra tsy nifankahitana omaly alahady 12 jona 2022 nanomboka ny atoandro nitohy ny takariva efa maty masoandro tany Manja, ao anatin’ny Faritra Menabe.
Trosan’ny Air Madagascar 80.000.000 dolara Karohana miaraka amin’ny mpamatsy vola ny vahaolana
Haverina amin'ny laoniny ny Air Madagascar. Efa mitady ny fomba rehetra hanarenanana izany, ny fitondram-panjakana, raha ny nambaran'ny minisitry ny Fitanterana, Ranjatoelina Roland, ny sabotsy teo.
Fampodiana ny vata mangatsiakan’i Sabrinah 12.600.000 Ar no ilaina miala any Koweit
Mitady fanampiana amin’ny fampodiana an-tanindrazana ny vatana mangatsiakan’Itompokovavy Fanja Sabrina, izay avy any avaratry ny Nosy,
Noho ny resaka volamena 73,5 kg Sakanana tsy hiditra eto ny fiaramanidina Afrikanina Tatsimo ?
Sakanan’i Madagasikara ny fidiran’ny fiaramanidina rehetra avy atsy Afrika Atsimo, araka ny nambarann’ny fampahalalam-baovao Afrikanina Tatsimo Daily Maverick ny faran’ny herinandro teo.
RMDM Diaspora « Mba tsarao koa ireo dosie maloton’ny Fitondrana »
Namoaka fanambarana eo anatrehan’ny fiantsoan'ny BIANCO an'Andriamatoa Rivo Rakotovao, filohan'ny Antenimierandoholona teo aloha no sady Filoha vonjimaika nandritra ny volana vitsivitsy araka ny voafaritry
TENY GASY Ny Jesoita sy Madagasikara : Toko 1 (1613-1846)
Ny taona 1613, i Luis Mariano, Jesoita tera-tany italiana, no nifanerasera voalohany tamin’ny mpanjaka antanosy Tsiambany.